စင်ကြယ်သော Argan ရေနံ | Argan ရေနံ | HelpMeHemp - HelpMEHemp
ပင်မစာမျက်နှာ ထုတ်ကုန်များ စင်ကြယ်သောအာဂန်ရေနံ
HelpMEHemp's® သန့်စင်သော Argan Oil သည်အသန့်ရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်ပြီးရွှေအရည် ဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်ကြသည်။ ဗီတာမင်အီး၊ မရှိမဖြစ်ဖက်တီးအက်စစ်များ၊ လင်းနိုအက်ဆစ်များနှင့်သင့်အသားအရေ၊ ဆံပင်နှင့်လက်သည်းများကိုအမှန်တကယ်အသွင်ပြောင်းပေးနိုင်သည့်အာဟာရဓာတ်များပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သန့်စင်သော Argan Oil သည်သင်၏အသားအရေကိုပြန်လည်သန့်စင်ပေးပြီးအစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးခြင်း၊ ခြောက်သွေ့သောအနာအဆာများကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ ဝက်ခြံထွက်ခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အားနည်းနေသည့်အရေပြားအပါအ ၀ င်ဆန့်တံများ၊ အက်ကွဲခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးတို့မှအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်သည့်ခြောက်သွေ့။ ချောမွေ့သောဆီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းအားအပေါက်များပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်အစိုင်အခဲကျန်ရှိနေသည့်အလွှာများမှထွက်ခွာခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။. HelpMEHemp's® သန့်စင်သော Argan ရေနံ ပျက်စီးသွားသောဆံပင်များကိုသဘာဝအတိုင်းတောက်ပစေပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ပေးသည်။ အစွန်အဖျားများကိုကာကွယ်ပေးသည်။ လက်သည်းလက်သည်းများကိုသဘာဝပြန်လည်မွေးဖွားစေသည်။
HelpMEHemp® ကုန်ပစ္စည်းကိုသိုလှောင်ရန်ခဲယဉ်းသောခဲနေသောဖန်သားများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင့်အားရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်စေပြီးမည်သည့်အန္တရာယ်ရှိသည့်အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်မှမဆိုဆီကာကွယ်မှုကိုသေချာစေသည်။ Let HelpMEHemp's® သန့်ရှင်းသော Argan Oil သည်အဝါရောင်အုတ်လမ်းဖြစ်ပြီးသင့်အသားအရေကိုအိမ်သို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။
ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ! Argan Tree သည်အာဖရိကမြောက်ပိုင်း၊ မော်ရိုကိုနိုင်ငံတွင်တည်ရှိသည်။ ဤသီးသန့်သီးသန့်ဖြစ်သောကြောင့် ၀ ယ်လိုအားနှင့်ရောင်းလိုအား၏စီးပွါးရေးအခြေခံမူများကြောင့်သစ်ပင်၏အသီးမှထုတ်ယူသောဆီထုတ်လုပ်မှုသည်အမြတ်အစွန်းများစွာရှိပြီးမော်ရိုကိုစီးပွားရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဤသဘာဝသွေးရည်ကြည်နှင့်၎င်း၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု၏ကုထုံး၏အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ “ Moroccan Oil” သည်စီးပွားဖြစ်ရောင်းချသောဈေးပေါသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကြီးမားသောသေတ္တာကြီးများရောင်းဝယ်သူများနှင့်ဌာနစတိုးဆိုင်များအတွက်ကြီးမားသောဘဏ္gainာရေးအမြတ်အစွန်းများကြောင့်စီးပွားရေးအရရောင်းရသော“ Moroccan Oil” တွင်ထုတ်လုပ်သည့်ဆီလီကွန်များ၊ အရောင်၊ အမွှေးအကြိုင်၊ ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု၊ သို့မဟုတ်ရောစပ်ထားသောအသံအတိုးအကျယ်အတွက်အထူးပေါင်းထည့်ခြင်းများ။ ဤသည်ယုတ်ညံ့သည့်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သည်ပုံမှန်အားဖြင့် Argan Oil နှင့်ဆက်နွယ်သောကုသမှုစွမ်းရည်အနည်းငယ်သာရှိသည်။
HelpMEHemp®သည်ဖောက်သည်များကို PUREST ပုံစံဖြင့် Argan oil ကိုပေးသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းသာရှိသောမော်ရိုကိုနိုင်ငံမှတိုက်ရိုက်ထုတ်ယူခဲ့သည်။
9 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ. ထင္ျမင္ခ်က္ေရးထားခဲ့ပါ။
ဒီအာဂွန်ရေနံဟာသင့်ကိုကူညီနိုင်တဲ့နည်းလမ်းများစွာ၊ ဝက်ခြံ၊ ခြောက်သွေ့တဲ့အစက်များ၊ ဖြတ်တောက်မှုများကိုလည်းကုသပေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏မြေးဖြစ်သူသည်အခြားတစ်နေ့တွင်သူမမျက်နှာကိုကုတ်ခြစ်လိုက်သည် (သူသည်အသက်တစ်နှစ်သာရှိသေးသည်) ။ ငါကအာဂွန်ဆီကိုတင်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်မီးလောင်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီ။ ယခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အကြောင်းကိုပင်သင်မပြောနိုင်ပါ။
ဤထုတ်ကုန်သည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအလင်းရောင်နှင့်အရေပြားကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်လက်သည်းကုတင်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကိုယ်ကြိုက်တယ်!
နံနက်တိုင်းနှင့်ညစဉ်ညတိုင်းကျွန်ုပ်၏မျက်နှာအတွက်အာဂရန်ဆီကိုသုံးသည်။ ငါ့မှာအရမ်းထိခိုက်လွယ်တဲ့အသားအရေရှိတယ်။ ဒီဟာကငါ့အတွက်တစ်ခုတည်းသောဆီပဲ။ ငါပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုတဲ့အခါငါအသွင်ကူးပြောင်းမှုဖြတ်သန်းသွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလုပ်လုပ်တယ် ညဘက်တွင်လည်းထိုအရာကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်၏ခြေထောက်များကိုစိုစွတ်အောင်ပြန်လည်တည့်တည့်ထားပါ။
ငါဒီပစ္စည်းတွေကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကွန်တိန်နာဘယ်လောက်သေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အံ့သြသွားတယ်။ သော်လည်းအလွန်ကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယ။
HelpMEHemp အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုလိုင်းကို အသုံးပြု၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ psoriasis သက်သာစေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်၏ထုတ်ကုန်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မည်သည့်ဆေးနှင့်ဆေးညွှန်းမဆိုဆေးမဆိုနိုင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဦး ခေါင်းမှသည်ခြေချောင်းများသို့ဤထုတ်ကုန်ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါကငါ့ frizzy ဆံပင်နှင့်ငါ့ကြမ်းတမ်းဒေါက်ချောချောမွေ့ပြေရှာတွေ့! ကြိုက်တယ်!
ဘယ်သွားသွား Argan သွားတိုင်းငါ့လက်သည်းအိပ်ရာတွေကွဲပြီးအရေပြားတွေသွေးလာတဲ့အခါလေကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့အပိုင်းအစတွေကငါ့နှာခေါင်းကခြောက်သွေ့တဲ့အနာဖျားကနေသွေးထွက်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တောက်ပနေသောအနာများနှင့်အမည်းစက်များကိုမကြာခဏရရှိလေ့ရှိသည်။ ငါ Argan တရားဝင်အလျင်အမြန်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေသောအာဟာရဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူထုပ်ပိုးသည်ပြောရန်ရှိသည်။ ငါ Argan အကြောင်းလေ့လာသင်ယူရတာအရမ်းပျော်တယ်။ HelpMEHemp ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အနာကမ္ဘာသည်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးသဘာဝအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
မင်းကငါ့ရဲ့နေရောင်ခြည်ပါပဲ။ အကယ်၍ သင့်တွင်အမာရွတ်များရှိပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အဓိကခွဲစိတ်မှုပြုပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ချက်ချင်းပင်အာဂွန်ရေနံကိုကျွန်ုပ်နောက်ဆက်တွဲချိန်းဆိုချိန်တွင်စတင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကကျွန်ုပ်အားသူပြောခဲ့သည့်ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအံ့အားသင့်ခဲ့သည်။ ကြောင်း Argan ရေနံတ ဦး တည်းစင်ကြယ်သောပုံစံဖြစ်ရပါမည်! ဒီကားကငါ့ရင်ဘတ်အလယ်မှာရှိနေပြီးငါ့ကိုကူညီဖို့ကူညီပေးတယ်။ ဒီနွေရာသီမှာနေရောင်ခြည်ကိုဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ဘူးလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေရောင်ခြည် !!!!
အံ့သြစရာ ဤသည်ဝေးနေဖြင့်ဝေးငါ့အကြိုက်ဆုံးထုတ်ကုန်ပါ! ငါရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကျော်သုံးပြီးငါ့အသားအရေထဲမှာတွေ့ရတဲ့ခြားနားချက်ကအရူးပဲ။ သေးငယ်တဲ့လိုင်းတွေပျောက်ကွယ်သွား, ငါ့အရေပြားကတ္တီပါနှင့် dewey ကြည့်ရှိပါတယ်။ ထိုအကပျော့ပျောင်းသောကျန်းမာခံစားရ! အဲဒါကိုကြိုက်တယ်!
အကောင်းဆုံးရေနံဤဆီသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုတစ်ခုလုံးနှင့်အရေပြားပြissuesနာများကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါရှိသည် fuzz နှင့်ခက်ခဲရေနှင့်အတူကူညီသကဲ့သို့ငါငါ့ဆံပင်ပေါ်မှာအသုံးပြုခြင်းကိုချစ်။ ကောင်းတဲ့ပစ္စည်း
အရည်အသွေးမြင့်ဒီအာဂွန်ဆီကိုချစ်မြတ်နိုးပါ၊ အဲဒါကအရည်အသွေးမြင့်မားတယ်လို့သင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းမျက်နှာပေါ်ရှိသဘာဝဆီကိုအသုံးပြုခြင်း၌ကြီးမားသောယုံကြည်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အိုမင်းခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်းနှင့်သင့်အသားအရေကိုနူးညံ့စေသည်။
Argan Oil ဒီဆီဟာအံ့သြစရာပါ။ ဒါဟာငါ့မျက်နှာကိုတောက်ပစေသည်။ ဒါဟာချောကျိကျိမဟုတ်သောနှင့်ကျိန်းသေအစစ်အမှန်လန်းဆန်းအနံ့ရှိပါတယ် - ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်း jeruk! ကျိန်းသေငါ့အသားအရေ moisturizes! ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ဆံပင်များတွင်လည်းအသုံးပြုပါသည်။ မှိုခြောက်ပြီးနောက် / မဖြောင့်မီ၎င်းကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်ဆံပင်ကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမျှမမြင်ဖူးပါ။ Argan ငါ့ကိုလှပအောင် !!!! ကြိုက်တယ်!